ချင်းနှင့် မကွေးတိုင်း လေးမြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးချေးငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၉ သန်းခန့်ဖြင့် စီမံကိန်း?? - Yangon Media Group
ချင်းနှင့် မကွေးတိုင်း လေးမြို့နယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးချေးငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၉ သန်းခန့်ဖြင့် စီမံကိန်း??
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၃ဝ
ချင်းနှင့် မကွေးတိုင်း လေးမြို့နယ်အတွင်း စိုက်ပျိုး၊ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစိုက် ပျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (IFAD) ထံမှ ချေးငွေကန်ဒေါ်လာ ၉ သန်းခန့်ဖြင့် စီမံကိန်းဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သြဂုတ် ၃ဝ ရက် ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအ ဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနောက်ပိုင်းဒေသများ စိုက်ပျိုး၊ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအကောင်အထည်ဖော်ရန် IFAD ထံမှ ကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၉၈၄ သန်းချေးငွေရယူနိုင်ရန်နှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးဦးလှကျော်က လွှတ်တော်သို့တင်ပြရာ၌ ယင်းသို့ ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။ ယခုစီမံကိန်းသည် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မင်းတပ်မြို့နှင့် ကန်ပက်လက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်း မြောက်ပိုင်းရှိပေါက်နှင့် မြိုင်မြို့နယ်များရှိ အသေးစားနှင့်အလတ် စား စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကိုင်သူများ၊ မွေးမြူထုတ်လုပ်သူများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း မလုပ်ကိုင်နိုင်သူများနှင့် မြေယာမဲ့များအတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းဒေသလေး မြို့နယ်ရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၉၈- ၅ဝဝ ခန့်နှင့် ကျေးလက်ပြည်သူ ၄ ဒသမ ၃ သိန်းခန့်ကို အကျိုး ပြုနိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းကို ”မိသားစု ဝင်ငွေ တိုးတက်စေဖို့၊ စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံစေဖို့၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်ရရှိစေဖို့၊ အာဟာရ ပြည့်ဝစေဖို့ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုကို တုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းအား ကောင်းလာစေဖို့ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ရည်ရွယ်၍ IFAD မှ ချေးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၉၈၄ သန်း ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းချေးငွေ၏ အတိုးနှုန်းမှာ သုညရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင် ခအဖြစ် တစ်နှစ်လျှင် သုည ဒသမ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးချေရမည်ဖြစ်ကာ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်ကာလမှာ ဆိုင်းငံ့ကာလ ၁ဝ နှစ်အပါ အဝင် နှစ် ၄ဝ ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်းကာလကို ခြောက်နှစ်ဖော် ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစီမံကိန်းသည် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော လုပ်ကွက်ငယ်တောင် သူများ၊ အိမ်ခြံဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်သော အမျိုးသမီးဦးဆောင်အိမ်ထောင်စုများ၊ မြေယာမဲ့အိမ် ထောင်စုများ၊ လူနည်းစုတိုင်းရင်း သားများအားဦးတည်ပြီး စိုက်ပျိုး ရေးအခြေခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ IFAD ချေးငွေအပြင် ထောက်ပံ့ငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၃ ဒသမ ၉၇၈ သန်း၊ အစိုးရထည့်ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ သုည ဒသမ ၉၉၄ သန်း၊ အ ကျိုးခံစားရမည့်ပြည်သူများ ပူး ပေါင်းပါဝင်မှုတန်ဖိုး ကန်ဒေါ်လာ သုည ဒသမ ၇၈ သန်း၊ မိတ်ဖက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ထည့် ဝင်ငွေကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ဝ၅ သန်း၊ ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်အ ဖွဲ့များမှ ထည့်ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ ၄ ဒသမ ၄၇၁ သန်းတို့လည်း စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်းကန်ဒေါ်လာ ၂ဝ ဒသမ ၂၅ သန်း ဖြင့် ဖော်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”စီမံကိန်းလုပ်ငန်း တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ တည်ထောင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာန များနဲ့ IFAD တို့က ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမှ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော်က ပြောသည် နှစ်ရှည်ချေးငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၈ ဒသမ ၉၈၄ သန်းကို ပြန်လည် ပေးဆပ်ရမည့်ကာလ ၁၁ နှစ်မြောက် ဖြစ်သည့် ၂ဝ၂၈-၂ဝ၂၉ ဘဏ္ဍာ နှစ်မှစပြီး ခြောက်လတစ်ကြိမ် ကန် ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၅ သိန်းနှုန်း ဖြင့် နှစ် ၃ဝ ပြန်လည်ပေးဆပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အစွန်းရောက်တို့၏ ကန့်ကွက်မှုနှင့် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုများကို ကြောက်ရွံ့သဖြင့် ရခိုင်တွင် NV ကတ?
ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အားကစား ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌဖလား အမျိုးသမီး ကိုယ်ကာယကြံ့ခိုင်မှု ဖိတ်ခေါ်ြ??
ပြည်သူပိုင် ‘ဝဇီရာ’ ရုပ်ရှင်ရုံကို ပြန်လည် ရယူလိုကြောင်း ပိုင်ရှင်၏ မျိုးဆက် သတင်းစာ ရှင်းလ??